Posted by Andaman Hero at 1:42 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 8:49 PM0comments
မလွတ်လပ်ခဲ့ကြတာက ၊ လွတ်လပ်ရေးရကထဲကပေါ့၊
အကြံဥာဏ်တွေပက်စက် ၊ လိုချင်ရင်တိုက်ဟဲ့လို့ ၊
အာဏာရုးတွေ ၊ ရန်မီးမွှေးခဲ့ကြလို့ ပေါ့ ။
အမိမြေဟာဒါဏ်ရာဗလပွ ၊ ညီနောင်တွေကွဲကြ ၊
ငါမနိုင်ရင် ထပ်ပြီးရွေး ၊ ပွေလိမ်ရှုပ်တဲ့မျိုးစေ့ ၊
ချခဲ့တာ နိုင်ငံရေးပဏ္ဍိတ ၊ အဲဒီကထဲကပေါ့ ။
အစမကောင်းလို့ ၊ အနှောင်းမသေချာ ၊
လက်ထောက်ချလို့၊ စစ်ခွေးကိုလမ်းပြ ၊
ဓါးပြတိုက်ခံလိုက်ရတာ ၊ တို့ ဘိုးဘွားအိမ်ပေါ့ ။
ဇူလိုင် စက်တင်ဘာ ၊ အဖိုးကနေမြေး ၊
ကျွန်သက်ကရှည် ၊ အရှုံးနဲ့ တိုက်နေရပေမဲ့ ၊
တော်လှန်တဲ့မျိုးဆက် ၊ တို့ လက်ထက်မှာ ၊
စစ်မျိုးကိုဖြုတ်ခဲ့မယ် ၊ မင်းတို့ ရဲ့နေ၀င်ချိန်ရောက်ပြီ .. ဟေ့ ….
၂၃.၁၂.၂၀၀၇ နံနက် ၂း၀၅
မှတ်ချက် ။ ။ ဇူလိုင်သည် ၁၉၆၂ ဇူလိုင် ၇ ကိုဆိုလိုသည်။
စက်တင်ဘာသည် ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာကိုဆိုလိုသည်။
Posted by Andaman Hero at 2:11 AM0comments
Posted by Andaman Hero at 11:47 PM0comments
မဲဆောက် … တဲ့
မဲဆောက် … ပေါ့
အို … မဲဆောက်ရဲ့
အခု လင်ကွန်းနဲ့ တွေ့ချင်သူတွေရဲ့
ကွဲလွဲရင်း ပေါင်းစည်းနိုင်တဲ့ မဲဆောက်။
တိုက်ယူမှ ရမယ်လို့ ယုံကြည်သတဲ့။
အို … မဲဆောက်ငဲ့
အို … မဲဆောက်
ကိစ္စကောင်း ဖြစ်တယ် မဲဆောက်။
တော်လှန်တဲ့ အတွေးအခေါ်တရပ် မရှိဘဲ
တော်လှန်တဲ့ အရေးတော်ပုံတရပ် မရှိနိုင်ဘူး
၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကလွဲလို့
ဘာမှ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိဘူး။
အတ္တဆိုလို့ `မခင်ဦး'ကို ချစ်မိတာ
နှင်းရေ … လို့ အော်လိုက်
ခေတ်ကို ကဗျာနဲ့လည်း တိုက်လို့ရတယ်။
ဒီမှာပဲ ရှိလာမယ့် မဲဆောက်ပေါ့။
လဲလိုက် ထလိုက်တော့ ရှိမှာပေါ့။
… ညဦးယံ၌ ငိုကြွေးခြင်းသည်
အို … ရဲဘော်အပေါင်းတို့ …
ရန်-ငါ ပြတ်မှ ဖြစ်မယ်။
နိုင်ငံတကာ …။ ။
(၁၅၊ ၁၂၊ ၀၇)
Posted by Andaman Hero at 11:44 PM0comments
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ရက်ရက်စက်စက် ၀င်အစီးခံရ။ ဖြိုခွင်းခံရတာဟာ မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ လူမှုရေးတည်ငြိမ်မှုကို တဘက်တလမ်းက ထိန်းပေးနေတဲ့ လူမှု အဆောက်အအုံတခု ဖျက်စီးခံလိုက်ရသလိုဘဲ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုံး လောက်ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘုန်းကြီးတွေဟာ လူထုပေါ်မှာရော တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရပေါ်မှာပါ အတိုင်းအတာတခု တခုအထိ အရှိန်အ၀ါရှိတယ်။ အနောက်တိုင်းက လစ်ဘရယ် အယူအဆတခုဖြစ်တဲ့ လူထုကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ အုပ်ချုပ်ခြင်း (rule of representative government) ဆိုတဲ့ အယူအဆ အသားမကျသေးတဲ့ နိုင်ငံမှာ အုပ်စိုးသူများရဲ့ အာဏာတရားဝင် မ၀င်ဆိုတာ အဲဒီအုပ်စိုးသူ မင်းများကို သာသာနာပိုင်များက ဘယ်လို သဘောထား သလဲဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ အကဲဖြတ်တာမျိုး တွေ့ရတတ်တယ်။
ဒီအချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း လေ့လာနေတဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပက လေ့လာသုံးသပ်သူတွေကြားမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံကြတယ်။ သာသနာကို အလုပ်အကျွေးပြုခြင်း၊ တနည်းအားဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများကို လိုအပ်တဲ့ အထောက်အပံ့ပေးခြင်းဟာ အုပ်စိုးသူများရဲ့ တာဝန်တခုဆိုတာ မြန်မာ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ အစဉ်အဆက် ခံယူလာတဲ့ အချက်တခု ဖြစ်တယ်။ သီပေါမင်း ပါတော်မူပြီးနောက် အင်္ဂလိပ် အစိုးရမင်းများကို ကိုယ့်အရှင်သခင်အဖြစ် လက်မခံနိုင်တဲ့ အကြောင်းတခုက အင်္ဂလိပ် အစိုးရမင်းကို မိစ္ဆာ အယူဝါဒကို ကိုးကွယ်သူအဖြစ် မြင်ကြတဲ့အတွက် ဖြစ်တယ်။ ဆိုတော့ လူထုပေါ်မှာရော၊ အုပ်စိုးသူများပေါ်ပါ အရှိန်အ၀ါရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းများဟာ လူမှုဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေကို အစိုးရက နိုင်နိုင်နင်းနင်း လုပ်တာမျိုး မရှိတဲ့ မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အရေးပါတဲ့ လူမှုဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေကို သူ့နည်း သူ့ဟန်နဲ့ တဘက် တလမ်းက ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ အင်မတန်မှ အရေးပါတဲ့ လူမှုရေး အဆောက်အအုံတွေ ဖြစ်နေတယ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှုကို တရားလွန် မဖြစ်အောင် ထိန်းတဲ့အခါ လူတိုင်း လူတန်းစေ့ နေနိုင်ရေးအတွက် လူမှုဖူလုံရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဖော်ဆောင်တဲ့အခါ ချမ်းသာတဲ့ လူဆီက အခွန်ကို များများကောက်ပြီး အဲဒီက ငွေတွေကို တဘက်အစွန်းကို ပို့ပေးတဲ့အလုပ်ကို အစိုးရ အေဂျင်စီတွေက လုပ်တယ်။ အဲ့သလို လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်မဲ့ အစိုးရ အေဂျင်စီတွေ မရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လူမှုတည်ငြိမ်မှု မပြိုပျက်အောင် ထိန်းပေမဲ့ ပုံသဏ္ဌာန် တိတိကျကျ မဟုတ်တဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ အားကောင်းလာတယ်။ အဲ့ဒီ အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဟာ ရှေ့တန်းက ပါဝင်နေတယ်။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ဘုန်းကြီးကျောင်းကို လှူလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းကို ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေက လိုအပ်တဲ့ သူတွေဆီကို ပြန်လည် ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်တယ်။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ လူကြည်ညိုတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးက မရှိဆင်းရဲသားတွေအတွက် ငွေလှူကြပါ၊ ပညာမသင်နိုင်တဲ့ ခလေးတွေအတွက် ကျောင်းလေးစီစဉ်ချင်တယ်၊ တတ်နိုင်သမျှ ၀ိုင်းကြပါဆိုပြီး ဆော်သြ လိုက်ရင် ရပ်ထဲရွာထဲက ငွေကြေး ချောင်လည်သူများဆီက ပိုက်ဆံဟာ ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ ဆော်သြချက်နဲ့ဘဲ လိုအပ်နေတဲ့နေရာကို ရောက်လာတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူတွေ စားဝတ်နေရေး ပိုပိုကြပ်တည်းလာတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဌဟာ ပိုတောင်မှအရေးပါလာ ပိုတောင်မှကျယ်ပြောလာတယ်။ မရှိဆင်းရဲသားတွေကို ကျောင်းမှာ လက်ခံကျွေးထားတာအပြင် မူလတန်းကျောင်းတွေ ဖွင့်ပေးတာတို့၊ မြို့တက် ဆေးကုတဲ့အခါ တည်းစရာမရှိတဲ့ သူတွေအတွက်နေရာ ထိုင်ခင်း စီစဉ်ပေးတာမျိုးတွေထိပါ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရဲ့ လုပ်နိုင် ကိုင်နိုင်စွမ်းတွေဟာပို ကျယ်ပြန့်လာတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲကနေစင်ထွက်လာတဲ့ တုန်လှုပ် ခြောက်ခြားစရာ လောကဓံတွေကိုလည်း ရေမြှုတ်ကြီးတွေလို ကောင်းကောင်းစုပ်ယူနိုင်တဲ့ လူမှုအဖွဲ့ အစည်းတွေ ဖြစ်တယ်။ အနောက် နိုင်ငံတွေမှာလို (counseling) လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုး ဆိုလိုတာက အဆင်မပြေမှု တခုခုကြောင့် စိတ်မော လူမောဖြစ်နေတဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ကြုံတွေ့ ခံစားချက်ကို စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်ကို ရင်ဖွင့်ပြီး စိတ်သက်သာရာ ရအောင်ကြိုးစားတာမျိုးဟာ ဗမာမှာ မရှိပေမဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဟာ အလားတူ လုပ်ငန်းမျိုးကို လုပ်ပေး နိုင်စွမ်း ရှိတယ်။ လုပ်လဲလုပ်ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်။
မြန်မာ့ လူနေမှု စံနစ်ပုံစံမှာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ကိုယ်ပါ အမှတ်အသားလိုမျိုးလဲ ဖြစ်နေတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ မြန်မာ ဘာသာစကားမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ အများကြီး စိမ့်ဝင်နေသလို မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမကို တဆင့်ခံယူရာ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ သားတော်များ အဖြစ်နဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို လူတွေက ရှုမြင် လက်ခံကြတဲ့အတွက် ဖြစ်တယ်။ ဒတ်(ချ) လူမျိုးမနုဿဗေဒပညာရှင် တယောက်က မြန်မာတယောက်ကို ဘာလူမျိုးလဲလို့ မေးတဲ့အခါ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးလို့ ဖြေတဲ့အတွက် အံ့အားသင့်ဘူးကြောင်း ပြန်ပြောပြဘူးတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် သာသနာ ကွယ်ပျောက်တာဟာ လူမျိုးပျောက်သလို ဖြစ်လိမ့်မယ်။
တချို့နေ့စဉ်ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုလို ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေမှာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့ မပတ်သက်လို့ မရတာတွေ ရှိတယ်။ ဥပမာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဓလေ့တခုဖြစ်တဲ့ မနက်ဘုန်းကြီး ဆွမ်းလောင်းတာမျိုး၊ အသံမစဲ ပဌာန်းပွဲတွေဟာ မြန်မာ လူမျိုးတွေနဲ့ ကင်းလို့ မရတဲ့ ကိစ္စတွေဘဲ။ ကျနော့် အမေဆို မနက်ဘုန်းကြီးဆွမ်း မလောင်းရရင် တခုခု လိုအပ်နေသလို ခံစားရတယ်လို့ ပြောတတ်တယ်။ တခြား ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးများဟာလဲ အလားတူ ခံစားကြရမှာဘဲ။ လောကီသားတွေရဲ့ ဒါနပါရမီ ဖြည့်ဆည်းရာမှာ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက သံဃာအဖွဲ့အစည်းဟာ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ လိုအပ်ချက်၊ ရုပ်ဝထ္ထုပစ္စည်းတွေ မပြည့်မစုံဖြစ်မှုကနေ ပေါ်လာတဲ့ အဆင်မပြေမှု အမျိုးမျိုးနဲ့ ကြုံနေရသူတွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အေးငြိမ်းမှုပေးနေတဲ့ လူမှု အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေ ဖြစ်တယ်။ ခုဘုန်းတော်ကြီးတွေကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်း ပစ်လိုက်တာဟာ ကျနော်တို့ မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ သာသနာ့ဝန်တင်မက မရှိမဖြစ် အရေး ပါတဲ့ လူမှုဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေကိုပါ ၀င်ထမ်းနေရတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကြီး တခုလုံးကို တိုက်ခိုက်လိုက်ရာ ရောက်တယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘက်မှာ မဖွံ့ဖြိုးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက လူတွေကို တတ်အားသရွေ့ စိတ္တသုခ ပေးနေတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကြီး ပျက်စီးသွားတာဟာ လူတွေကို ဆောက်တည်ရာမရ ဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်။ ဒါတွေဟာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းမှုရဲ့ ရေရှည် အကျိုးဆက်တွေဘဲ။
Posted by Andaman Hero at 11:23 PM0comments
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့လေးစား .. ဂုဏ်ယူရတဲ့ .. သူတွေ.
Posted by Andaman Hero at 6:01 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 5:56 PM0comments
မခြောက်သော သွေးနှင့် မျက်ရည်
အေးချမ်းမြေ့ | ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇
စက်တင်ဘာလရဲ့လကုန်ပိုင်းဆိုပေမယ့် မိုးသားမိုးရိပ်သိပ်မမြင်ရတာ လေးငါးရက်ရှိပြီ။ အတိအကျဆိုရပါက သံဃာတော် တွေ ကံဆောင်ပွဲစတင်ကတည်းက မိုးရိပ်တို့လျော့ပါးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မိုးရိပ်မမြင်ရသော်လည်း ကျဲကျဲတောက်နေပူနေ ခြင်းကားမဟုတ်၊ နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းရုံ မိုးကပျပျ ကလေး အုံ့နေသည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြနေသော သံဃာတော်များအတွက် သဘာဝက တမင်ဖန်တီးပေး ထားသလားပင် ထင်ရ၏။
အဲဒီနေ့ဆိုတာက စက်တင်ဘာ၂၆ ရက်နေ့ကိုပြောချင်တာဖြစ်သည်။
မနက်ပိုင်းသူရုံးရောက်ကတည်းက ဟိုနားတိုးတိုး ဒီနားတိုးတိုးနှင့် “ဒီနေ့ အခြေအနေမကောင်းဘူးလို့ကြားတယ်” ဆိုသည့် စကားကိုတယောက် တပေါက် ပြောနေကြသည်။ ဘယ်သူမှ အလုပ်ကိုစိတ်မ၀င်စားနိုင်ကြ၊ အပြင်ထွက်ကြဖို့ လူကြီး အလစ်ကိုချောင်းနေကြသည်။ သူတို့အားလုံး အလုပ်ထဲမှာစိတ်မ၀င်စားနိုင်ကြတာ ခုမှမဟုတ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးရက် လောက်ကတည်းက ဖြစ်သည်။
တကယ်တော့လည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားနိုင်ကြတာ သူတို့အလုပ်က အစိုးရအလုပ်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်၏။ အစိုးရ၀န်ထမ်း တွေကတော့ ကံဆောင်ပွဲစတင်ကတည်းက ရုံးချိန်အပြင်ထွက်ခွင့်မရကြ၊ အလုပ်မဆင်းလို့လည်း မရ အလုပ်မဆင်းသူ လက်မှတ်မထိုးသူကိုနိုင်ငံတော်ပုန်ကန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်မည်တဲ့။ သူတို့ကတော့မရ မွန်းတည့်၁၂ နာရီထိုးပြီးဆိုတာနဲ့ အပြင်ထွက်ဖို့ချောင်းကြပြီ။ ပြီးတော့ အချင်းချင်း ဖုန်းများနှင့် ဘယ်ရောက်နေပြီ ဆိုတာသတင်းပေးကြသည်။ အနီးဆုံးနေရာ ကသွားစောင့်ပြီး ကိုယ်နိုင်သလောက် ပါဝင်ကြသည်။
သံဃာတော်များ၏ ဖိနပ်ဗလာ ခြေထောက်များက သွေးချင်းချင်းနီနေပြီ။ သူတို့လျှောက်ခဲ့သော ခရီးအကွာအဝေး၊ သူတို့ လျှောက်ခဲ့သောရက်များနှင့်တွက်ကြည့်လျှင် စိတ်တစ်ခုတည်းကြောင့်သာ ဒီလို လျှောက်နိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ မကြည့်ရက် သောဒကာ ဒကာမများက တတ်နိုင်သလောက် ၀တ်ဖြည့်ကြသည်။ ၂၄ ရက်နေ့က သူတို့အဖွဲ့ လူအုပ်ကြီးနှင့်အတူ လိုက်လျှောက်သွားခဲ့ကြသည်။ မိုင်ပေါင်းဘယ်လောက်များများလျှောက်ခဲ့သလဲသူတို့မသိ။ သေချာတာကတော့ ဒီလောက် ခရီးအကွာအဝေးကိုသူတစ်ယောက်တည်း လျှောက်ဆိုလျှင်လျှောက်နိုင်မှာမဟုတ်။
“နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေ”ဆိုသော အသံကဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ရှိလှသည်။ ဘေးကရပ်ကြည့်သူ ဘယ်သူမှ မနေနိုင် အနည်းဆုံးတော့ လက်ခုပ်တီး အားပေးမိကြသည်ချည်း။ ၂၅ ရက်နေ့ကြတော့သူတို့မလိုက်ဖြစ်ကြတော့ ရေသန့်ဘူးများ
၀ယ်ပြီးစောင့်နေကြသည်။ သံဃာတော်များလာတော့ သူတို့ရေသန့်ဘူးများကပ်လှူကြသည်။ သံဃာတော်များကား ပင်ပမ်းနေသော်လည်းနွမ်းနယ်ချင်းမရှိ။ သူတို့ဘေးက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များလည်း ရေသန့်ဘူးများ ကပ်တာတွေ့ရသည်။
မဟာဗန္ဓုလလမ်းပေါ်မှာ လူအုပ်ကြီးဖြင့်ပြည့်ကျပ်နေသည်။ မဆုံးနိုင်သော သံဃာတန်း လူတန်းကြီးကို ဘေးက လူများက လက်ချင်းချိတ်ဆက်ပြီးကာပေးထားသည်။ လက်ခုပ်သံများက ဟိန်းဟိန်းညံနေသည်။ ဆက်လိုက်သွား ချင်သော်လည်း သူ့ဆန်စားနေရသည့်ဘ၀ဖြစ်သောကြောင့် အားပေးရုံပေးပြီး ပြန်လာခဲ့ရသည်။
အသံတွေကတော့အမျိုးမျိုး၊ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားတွင်လည်း လူများက 47 (ဖော်တီဆဲဗင်း) ဟုအမည်ပေးထားသော သံဃာ့နာယက အဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်ကြီးများ၏ မသက်မသာ ရုပ်ပုံများကို အသံတိတ် ပြသနေသည်။ သူတို့ဘာပြောကြသလဲ ဆိုတာ ဘာမှမလွှင့်၊ နိုင်ငံတကာသတင်းတွင်လည်း မြန်မာသတင်းကကြီးစိုးနေရာ ဖြတ်တောက်လွှင့်ရသဖြင့် ဘာမှမကျန် တော့။ လွှင့်စရာမရှိသဖြင့် မနေ့က တစ်နေ့က ဟိုးတစ်နေ့ကသတင်းများ ကိုသာထပ်ခါထပ်ခါလွှင့် နေသည်။
၂၅ ရက်နေ့ညသတင်းမှာတော့ ကံဆောင်ပွဲမရပ်လျှင် တစ်ခုခုလုပ်တော့မည်ဆိုသည့်ပုံစံမျိုးပြောလာသည်။ အဲဒီနေ့ညနေက ၄၆ လမ်းစီးတီးမတ် နားက အဆောက်အဦသစ်မဆောက်ရသေးသည့် ကွက်လပ်ကြီးတွင် စစ်ကားတွေရောက်နေပြီ။ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဟိုနေရာ သည်နေရာတွေမှာလည်း စစ်ကားတွေ စစ်တပ်တွေမြင်နေ ရသည်။
လူတွေကတော့မြန်မာ့အသံကိုမကြည့်ကြတော့။ စလောင်းတပ်ထားသူတွေက CNN, DVB တွေဖမ်းကြည့်သည်။ မရှိသူ တွေက ရေဒီယိုနားထောင်သည်။ အဲဒီတော့ ဘယ်လိုပဲဖြတ်ထားဖြတ်ထား သတင်းတွေကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိကြ ကြားကြရသည်။ သူတို့သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ကံဆောင်ပွဲမှပြန်လာတာနှင့် အင်တာနက် ကဖေးကိုပြေးကြသည်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှ ဘလော့များကိုကြည့်သည်၊ ဖြန့်သည်၊ အချင်းချင်း ချက်တင်လုပ်ရင်း ပြောကြဆွေးနွေးကြသည်။
၂၆ ရက်နေ့မှာတော့ ဘလော့များ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်များ ဖွင့်မရတော့။ ၂၇ ရက်မှာတော့ အင်တာနက်လုံးဝမရတော့ ဆိုင်များပါ ပိတ်ထားလိုက်ရသည်။ အင်တာနက်နှင့်စီးပွားရှာသူများဒုက္ခရောက်ရတော့သည်။ အားလုံးရေဒီယိုနှင့် စလောင်းကိုအားကိုး ကြရတော့သည်။ ဆိုင်များတွင် ရေဒီယိုများရောင်းစရာမရှိတော့လောက်အောင် ပစ္စည်းပြတ် သွားသည်၊ စလောင်းဆိုင်များ တွင်လည်း ပစ္စည်းပြတ်သည်။ စလောင်းဆင်သူများလက်မလည်အောင် အလုပ်များ ကုန်သည်။ သတင်းငတ်နေသည့် လူများက အပြင်းအထန် အားပေးကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဲဒီနေ့က ခါတိုင်းလိုပင်မိုးမရွာ နေကလည်းအရမ်းမပူ နေထိုင်ကောင်းရုံ အနေအထားလေး။ မနက်၁၁ နာရီ ကျော်ကျော် လောက်မှာတော့ ဖုန်းဝင်လာသည် ရွှေတိဂုံဘုရားမှာရိုက်နေကြပြီတဲ့။ ဆူးလေဘုရားကိုလည်း ၀ိုင်းထားပြီလို့ကြားသည်။ ရုံးပေါ်ကဆင်းပြီး ဆူးလေစေတီနားပြေးသွားမိသည်။ စစ်သားတွေက သံခမောက် ပေါ်မှာ အနီရောင်ပတ်နှင့် တခါမှမမြင်ဘူး သည့်ပုံစံ။ လူတွေကသူတို့ကို မျောက်ပွဲကြည့်သလိုဝိုင်းကြည့် နေကြ သည်။ ဘယ်သူကမှတော့ ပစ်လိမ့်မည်ဟုမထင် အထူးသဖြင့် ၈၈ ကိုမမီလိုက်သည့် ကလေးများကတကယ် ပစ်မည် မထင်။ သူတို့လို ၃၀ကျော်အထက်ပိုင်းလူလတ်ပိုင်း တွေကတော့ သိပ်လျှော့မတွက်ရဲ။ ဒါပေမယ့် သိပ်တော့လည်းမကြောက်မိ။ သံဃာတွေကိုရိုက်နေပြီဆိုသည့်သတင်း ကလည်း ကြားထားတော့ စိတ်တွေက တင်းမာခက်ထန်နေသည်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲဘယ်သူမှထင်မှတ်မထားတာ စဖြစ်သည်။ ကြည့်နေသောလူတချို့က စစ်သားတွေကို ထိုင် ကန်တော့ပြီး “မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာ သံဃာတွေကို မရိုက်ပါနဲ့တော့”ဆိုပြီးပြောချိန် နှင့်တပြိုင်တည်းလိုလို မိုးက တဂျိမ်းဂျိမ်းထချိန်းတော့ သည်။ မိုးချိန်းသံကြားသည်နှင့်လူများက တိုင်ပင်မထားဘဲ လက်ခုပ်များထတီးရာ မခံစားနိုင်တော့သောစစ်သားများက မည်းမည်းမြင်ရာပစ်တော့သည်။ သူတို့ရှေ့တင်လူတစ်ယောက် လဲကျ သွားတော့မှ တကယ်ပစ်တာဆိုသော အသိစိတ်ဖြင့် မဟာဗန္ဓုလ လမ်းမကြီးအတိုင်းဖနောင့်နှင့်တင်ပါး တသားတည်းကျအောင်ပြေးမိတော့သည်။
ဘယ်သူကျန်ခဲ့သလဲ ဘယ်သူထိသွားလဲ မသိ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် ဘာဖြစ်နေပြီလဲမသိအောင် စွတ်ရွတ် ပြေးမိပြေးရာ ပြေးကြခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ရုံးခန်းတည်ရာရောက်မှ ဟင်းချနိုင်တော့သည်။ ရုံးအောက်ကိုမရောက်ခင် သူတို့ရုံးအောက် စတိုးဆိုင်က အရောင်းစာရေးမလေးနှင့်ဆုံသည်။ မောကြီးပမ်းကြီးပြေးလာပြီး သူ့ရှေ့ ရောက်တော့ အကြောက်လွန်ကာခွေ ခေါက်လဲကျသွားသည်။ နှာနှပ်ပေးပြီးသတိပြန်ရသည်အထိ အကြောက် ပြေသေးပုံမပေါ်။ သူ့အနားက သေနတ်ကျည်ဆံ များဖြတ်သွားသည်တဲ့။
တာမွေဘက်ကပြန်လာသည့်သူငယ်ချင်းကလည်း သူ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြသည်။“လူအုပ်ကြီးနဲ့အတူ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည် လမ်းအတိုင်း လျှောက်လာခဲ့တာ၊ အဲဒီလမ်းကြီးတစ်လမ်းလုံးအပြည့်ပဲ၊ စစ်ကားအဲဒီလမ်းထဲဝင်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်၊ လူတွေကလည်း အရမ်းညီတယ်၊ ကန်တော်လေးဆိုတာ တကယ်တော့ အစ္စလာမ်ရပ်ကွက် လေ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ ဘာသာကွဲဆိုတာမရှိတော့ဘူး၊ အားလုံးအတူတူပဲ ဖြစ်သွားတာ၊ တယောက်ကို တယောက် ကူညီဖို့ဆိုတာပဲသိတော့တာ”ဟု သူက ပြောသည်။
အဲဒီလူအုပ်ကြီးက ခဏနေတော့ မြို့ထဲဘက်အနော်ရထာလမ်းတလျှောက် လျှောက်လာတာတွေ့လိုက်ရသည်။ အဲဒီ နောက်ပိုင်းမှာတော့ တကမ္ဘာလုံးကသိပြီးဖြစ်သော မတရား တဘက်သက် ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ် ဖမ်းဆီးမှုကြီးများ ဖြစ်ကုန်တော့သည်။ ပြန်လည်းမပြောချင် ပြန်လည်းမကြားချင်တော့ပါ။
၂၇ ရက်နေ့ကဆို တရားလက်လွတ်ကိစ္စများတော်တော်ဆိုးရွားသည်။ တာမွေဘက်ကို မသွားမဖြစ်သွားရလို့ မကြားချင် မမြင်ချင်တာတွေကြားမြင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ လူအုပ်ကြီးက ခါတိုင်းလိုပဲ ရွှေဂုံတိုင်ဘက်ကလျှောက် လာရာ တာမွေ ဈေးနား တွင် စစ်တပ်နှင့်ထိပ်တိုက်တိုး၍ တွေ့ရာပစ်ပြီးလူစုခွဲရာ လွတ်ရာကျွတ်ရာထွက်ပြေးကြ ရသည်။ အနီးနားကမကြည့်ရဲ
သူတို့အသက်ကိုတော့ သူတို့ကနှမျောတတ်သား၊ စစ်သားက ပစ်တာကို ရဲက ကာပေးထားသည်။ တကယ်တော့ သေနတ်ကို အံတုနိုင်သည့်လက်နက် လူထုဆီမှာမရှိ။ လဲကျသွားသူထဲမှာ မိန်းမတွေ ကလေးတွေပါသည်။ အချိန်က အထက်တန်း ကျောင်းလွှတ်ချိန်ဖြစ်သည်။ လဲသွားသူကိုဘယ်သူမှသွားမဆွဲရဲ၊ ဒီတိုင်းအဝေးက ကြည့်နေကြရသည်။ ကျောက်မြောင်းက အစ်ကိုအိမ်မှာ သူထိုင်နေစဉ်မှာပင် ရယက လူကြီးရောက်လာသည်။ သီတာလမ်းမှာငှားနေသောတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား တဦးသေသွားသည်တဲ့။ အဲဒီကျောင်းသားက တိုက်ခန်းတွင် တဦးတည်းငှားနေတာဖြစ်သည်။ သူ့မိသားစုက စစ်တွေက ဆိုတာပဲသိသည်တဲ့။ ဘယ်သူမှသူ့မိဘများ၏လိပ်စာ ကို မပြောနိုင်ကြ။
ခဏနေလို့အားလုံးငြိမ်သွားမှ လမ်းမကြီးဘက်ထွက်ကြည့်တော့ ပစ်လို့ထွက်ပြေးရင်း ကြုံရာအိမ်ထဲဝင်ပြေးရာ အိမ်ရှင်များ ကိုပါ ဖမ်းခေါ်သွားသည်ဟုကြားရသည်။ အခွန်လွတ်ဈေးနားက သံချည်သံကွေးဆိုင်တဆိုင်ဆိုလျှင် အပေါ်ထပ်တက် ဖုန်းဆက်နေသူ ဆိုင်ရှင်မှလွဲပြီးတဆိုင်လုံးကိုဖမ်းခေါ်သွားသည်။ တချို့ အိမ်ထဲထိုင်ထမင်းစား နေသူကိုပါ ဆွဲခေါ်သွား သည်တဲ့။ ကြားရတာ နည်းနည်းမှ စိတ်သက်သာဖွယ်ရာမရှိ။
ဖြစ်ချင်တော့ ၂၇ ရက်နေ့ အဖမ်းခံခဲ့ရသူများထဲတွင် အသိကလေးတယောက် ပါသွားသည်။ တော်တော်ရင်းနှီး သူဖြစ်သော ကြောင့် ရှာဖွေဖို့ကူညီပေးခဲ့ရသည်။ ရေဝေးသုသာန် မီးသင်္ဂြီုဟ်စက်လည်းရောက်သည်။ ကျိုက်က္ကဆံကွင်းလည်းရောက် သည်။ ဆေးရုံကြီးလည်းရောက်သည်။ ဆေးရုံကြီးရင်ခွဲရုံတွင် အပစ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားသူ တယောက်၏ မိသားတစုနှင့် ဆုံသည်၊ ကျိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေသည့် သေဆုံးသူ ကောင်လေး၏ အစ်ကိုဖြစ်သူ မျက်နှာကို မျက်စိထဲကတော်တော်နှင့် မထွက်၊ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ နာကြည်းခြင်း၊ ပူဆွေးခြင်း၊ ခံပြင်းခြင်းတို့ ရောယှက် ထားသောမျက်နှာ။ လက်သီးကိုကျစ်ကျစ်ဆုပ် ထားပြီး ဘာမှမတတ်နိုင်သော အဖြစ်။ သူ့ညီသေသွားပြီဆိုတာ ဓာတ်ပုံမြင်ရသောကြောင့်သာသိရရှာသည်။ ရုပ်အလောင်း ကိုမြင်ရတာမဟုတ်။ သင်္ဂြီုဟ်ခွင့်လည်းမရ။
ရေဝေးရောက်တော့ အစောင့်စစ်သားက သေဆုံးသူများ၏ ဓာတ်ပုံများထုတ်ပြသည် ဓာတ်ပုံက၁၀ပုံသာ။ မျက်နှာများသာ မြင်ရသည်။ ထိုကောင်လေးမပါ။ သေဆုံးသူ ဒီထက်မကမှန်းတော့သိသည်။ သို့သော်မေးလို့ ကလည်းမရတော့ ပြန်လာခဲ့ ရသည်။ ကျိုက်က္ကဆံရောက်တော့ စစ်သားတွေသေနတ်နှင့်ဝိုင်းချိန်တာ ခံရသေး သည်။ အဲဒီမှာလည်း ဘာမှမေးလို့မရ။ နောက်တော့ အင်းစိန်ထောင်မှာလို့ကြားသည်။ တလလောက်ကြာတော့ မှ လွတ်လာသည်။ သူ့အစ်ကိုကတော့ ပိုက်ဆံ ကျပ်သုံးသိန်းလောက် ကုန်သွားသည်ဟုဆိုသည်။ ဟိုနည်းနည်း ဒီနည်းနည်းခွံ့ရသည်တဲ့။ ညီဖြစ်သူကိုဘယ်သူနှင့်မှ ပေးမတွေ့ဘဲ အမျိုးများရှိရာရွာသို့ ပို့ထားလိုက်သည်။ မသေတာကိုပဲကျေးဇူးတင်လှပြီတဲ့။
မေ့လည်းမမေ့သင့်ဟုထင်သည်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ ရုပ်ရှင်ကားများတွင်ကြည့်ခဲ့ဖူးသော စစ်တလင်း လိုဖြစ်နေသည်။ နေရာတိုင်းတွင်စစ်ကားများ စစ်သားများသာမြင်နေရသည်။ လူအားလုံးကျီးလန့်စာ စားဖြစ်နေသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက သူတို့ အလုပ်များကို မရပ်ချင်သောကြောင့် အလုပ်သာဆင်းပေး နေကြရသည်။ ဘယ်တော့ ဘာဖြစ်မလဲ တထိတ်ထိတ် စိုးရိမ်နေကြရသည်။
စစ်သားများကိုမုန်းတီးစက်စုပ်စွာကြည့်ရုံ၊ စစ်အစိုးရကိုနာကြည်းရုံသာ တတ်နိုင်သော ပြည်သူလူထုကား သနားစရာ ကောင်းလှသည်။ အရုဏ်တက် ဆွမ်းလောင်းချိန် အရင်လို သံဃာများတန်းစီ မကြွလာတော့ဘဲ ကိုရင်လေးတပါးနှစ်ပါးနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေး လောက်သာကြွလာသဖြင့် အမယ်ကြီးများမျက်ရည်လည်ရွှဲ ငိုပွဲ ဆင်ကြရသည်။
အဖြစ်က ဂျပန်ခေတ် ဖက်ဆစ်ခေတ်ကိုရိုက်ပြထားသော ဗီဒီယိုကားကြည့်နေရသလို။ သို့သော် ဒါရုပ်ရှင်မဟုတ် ကောလာ ဟလလည်းမဟုတ်။ တကယ့်အဖြစ် ကိုယ်တွေ့စစ်စစ်ဖြစ်သည်။ ရင်ထဲမှာသိမ်းထားခဲ့သည်။
တခုတော့ကျေနပ်မိသည်။ ၈၈ အကြောင်းလုံးဝမသိခဲ့သော သိဖို့လည်းမကြိုးစားခဲ့သော ယနေ့ ကျောင်းသားများကို တပ်လှန့်ပေးလိုက်သည်နှင့်တူသည်။ အားလုံးတသားတည်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။
ထိုသို့သော သွေးနှင့် မျက်ရည်ဆိုသည်မှာ ဘယ်တော့မှ ခြောက်သွားရိုးထုံးစံမရှိဆိုတာ သူတို့သိသွားပြီ။ အဲဒီအတွက်တော့ သူ ကျေနပ်မိပါသည်။ ။
တုတ်ရိုက် သင်တန်းတွေ ပေးနေပြီ
ကြည်ဝေ | ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇
စစ်အစိုးရက လူထုဆန္ဒပြပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားလာလျှင် နှိမ်နှင်းရန်အတွက် အဓိကရုန်းနှိမ်နင်းရေး တုတ်ရိုက် သင်တန်းကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အသီးသီးရှိ အားကစားကွင်းများတွင် ပို့ချလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တုတ်ရိုက်သင်တန်းအား မြို့နယ်အသီးသီးတွင်ရှိသော ရပ်ကွက်များအတွင်းမှ ပညာတတ် ရယကဥက္ကဌ ဖြစ်စေ၊ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်စေ တဦး မဖြစ်မနေ တက်ကြရပြီး ရပ်ကွက်တွင်းရှိ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်းဝင်များ၊ စွမ်းအားရှင်များ၊ မီးသတ်များ၊ စည်ပင်သာယာ ၀န်ထမ်းများအပြင်၊ စက်တင်ဘာလ နောက်ပိုင်းက အသစ်ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်သော ရပ်ကွက် လူငယ်အဖွဲ့များလည်း မဖြစ်မနေတက်ကြရကြောင်း သင်တန်းတက်နေသူများက ပြောပြကြသည်။
“အခြေခံစစ်ပညာက စပြီးသင်ရတယ်၊ ပြီးတော့ လူအုပ်ကို ဘယ်လိုလူစု ခွဲရမယ်၊ ဘယ်လိုရိုက်မယ်ဆိုတာတွေကို သင်ပေး တယ်၊ အဓိကကတော့ ဆန္ဒပြပွဲကလူတွေကို ဘယ်လိုနှိမ်နင်းမယ်ဆိုတာ စနစ်တကျ ဖြိုခွဲတတ်အောင် သင်ပေးတဲ့ သင်တန်း ပါ၊ တပ်ကြပ်ကြီးတွေက သင်ပေးပါတယ်”ဟု သင်တန်းတက်နေသော တောင်ဒဂုံတွင် နေထိုင်သည့် စွမ်းအားရှင်တဦးက ပြောပြသည်။
ထိုသင်တန်း တက်ရောက်သူများအား ထောက်ပံ့ကြေးငွေ ပေးခြင်းမရှိသော်လည်း လေ့ကျင့်ရာတွင် ၀တ်ရမည့် ဘောင်းဘီ နှင့် လေ့ကျင့်ရာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ၀ါးဆစ်တုတ်များ ထုတ်ပေးထားသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
“ရှင်းရှင်းပြောရရင် လူတွေကိုရိုက်ဖို့ လေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့ သင်တန်းပဲ၊ စာရင်းပါပြီး သင်တန်းမတက်ခဲ့ရင် မှတ်တမ်းတင်ခံ ရတယ်၊ ရာထူးမတက်ဘူးပေါ့ဗျာ၊ အဲဒါကြောင့်တက်နေရတာပဲ”ဟု ကျိုက္ကဆံကွင်းတွင် သင်တန်းတက်နေသော ရန်ကုန်မြို့မှ စည်ပင်သာယာ ၀န်ထမ်းတဦးက ဆိုသည်။
သင်တန်းချိန်မှာ ညနေ ၂ နာရီမှ ၄ နာရီထိဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလမှာ ၂ လဖြစ်ကြောင်း သင်တန်းဆရာမှာ စစ်တပ်ထဲမှ တပ်ကြပ်ကြီးများဖြစ်ပြီး ရဲဘက်ဆိုင်ရာမှ ဒုရဲအုပ်အဆင့်ရှိသူများလည်း ကြီးကြပ်ရေးတွင်ပါဝင် သင်ကြားပေးကြောင်း သင်တန်းတက်နေသူများက ပြောပြသည်။
“ရန်ကုန်တိုင်းက မြို့နယ်တွေကို သင်တန်းစပေးတာကတော့ အောက်တိုဘာ လဆန်းပိုင်းကတည်းကပါ၊ သူ့မြို့နယ်နဲ့သူ အသုတ်လိုက်ပေါ့၊ ၀န်ထမ်းတွေကိုတော့ နိုဝင်ဘာလ ဆန်းက စပြီးပေးတယ်၊ တခြား ၀န်ထမ်းတွေကိုလည်း ဆက်တိုက်ပေး သွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိပုံရပါတယ်”ဟု အဆိုပါသင်တန်းကို ကြီးကြပ်နေရသော သင်တန်းကြီးကြပ်ရေးမှူး တဦးက ပြောသည်။
ပဲခူးတိုင်း ကြံ့ဖွံ့အသင်းဝင်တဦးကလည်း “ဒီမှာစတက်နေရတာက ရယကတွေ၊ ကြံ့ဖွံ့တွေနဲ့ စွမ်းအားရှင်တွေပဲ၊ ၀န်ထမ်း တွေတော့ မပါသေးဘူး၊ တရပ်ကွက်ကို ရယက တဦး၊ ကြံ့ဖွံထဲက အနည်းဆုံး ၃ ဦး၊ စွမ်းအားရှင် ၃ ဦးနဲ့ မီးသတ်ဝန်ထမ်း တွေ မဖြစ်မနေ တက်ခိုင်းတယ်”ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင်သာမက တခြားပြည်နယ်နှင့် တိုင်းတချို့တွင်လည်း အဆိုပါ သင်တန်းကို နိုဝင်ဘာလ တတိယပတ်မှ စတင်ကာ သင်ကြားပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by Andaman Hero at 4:17 PM0comments
နအဖ .. ရေ .. ဒီလူတွေရေးတဲ့အခြေခံရမယ့်မူတွေ .. တိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုမှာလား ...
Posted by Andaman Hero at 4:07 PM0comments
စဉ်းစားကြည့်ကြဗျို့....
Posted by Andaman Hero at 12:58 PM0comments
Labels: ဆောင်းယွန်းလ ဘလော့ဂ်မှကူးယူဖေါ်ပြသည်။
Posted by Andaman Hero at 3:49 PM0comments
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအပြင်းအထန်နာမကျန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့- ကောလဟလ - ဟာကံထိုက်နေတာများလား
Rumors Say Than Shwe is Ill—Bad Karma?
Rumors are spreading within Burma and as far abroad as Singapore that the health of junta chief Snr-Gen Than Shwe is deteriorating, with many people suggesting he’s experiencing bad karma because of his brutal crackdown on peacefully demonstrating monks in September.
The rumors appear to have originated with Tatmadaw soldiers whose menial duties bring them into close contact with the 74-year-old general. From there, reports of his failing health reached higher ranking officers.
They broke surface on Thursday after Than Shwe metaChinese official who reportedly urged him to adopt reforms in order to improve the country’s economy. The general was reported to be suffering strain and “psychological problems.”
An earlier meeting withavisitor from Beijing,aChinese deputy foreign minister, was also followed byabout of ill health, ascribed by military sources to stress. The Chinese minister was believed to have urged Than Shwe to speed up work on the seven-step road map to democracy.
One source told The Irrawaddy that Than Shwe had been depressed byareport by the head of the United Nations Development Programme in Burma, Charles Petrie, who was expelled from Burma recently. The report highlighted the junta’s economic failures and mismanagement.
Rumors of Than Shwe’s ill health also circulated among Burmese living in Singapore, where members of the junta usually seek medical attention. Despite his reluctance to leave the country, for fear ofacoup in his absence, Than Shwe traveled to Singapore in January this year for treatment at Singapore General Hospital.
Than Shwe was in the hospital for about one week, but he reportedly rejected advice to undergo surgery foralife-threatening condition, saying he wanted first of all to consult his chief astrologer. He was said to be suffering from hypertension and diabetes.
Many Burmese say Than Shwe’s health problems are bad karma because of his suppression of the monks’ demonstrations. They point to the precedent of Snr-Gen Saw Maung, regime head and commander-in-chief of the Tatmadaw from 1988 to 1992, who launchedacrackdown onamonks’ boycott in 1990.
He subsequently fell ill—many say with psychological problems—and was replaced by Than Shwe in 1992. Two years later, Saw Maung died.
“Now it’s Than Shwe’s turn,” said one Buddhist resident of Rangoon. “He is responsible for the deaths of monks and has earned bad karma. His end could come very soon.”
Posted by Andaman Hero at 1:58 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 3:54 AM0comments
Ludu Daw Amar birthday's pictures
လှုပ်ရှားမှုဓါတ်ပုံတွေကို ၊ ကို ပီဂျီ ကပေးပို့ ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
Posted by Andaman Hero at 3:01 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 3:38 PM0comments
လူ့ အခွင့်အရေးနေ့ လှုပ်ရှားဖို့ တိုက်တွန်းပြီ
Posted by Andaman Hero at 6:12 PM0comments
၀န်ကြီးချုပ် 101 (ဆောင်းပါး)
Posted by Andaman Hero at 10:47 AM0comments
The Nation/Bangkok ၂၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့လာရောက်စဉ် မြန်မာနိုင်ငံ
အရေးကို ဆွေးနွေးမည်မဟုတ်ကြောင်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် စူရာယွတ်ချုလာနွန်က ပြောသည်။
မစ္စတာဘန်ကီမွန်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဒီဇင်ဘာ (၉) မှ (၁၁) ရက်အထိ လာရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းသို့လာရောက်ချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေကို ဆွေးနွေးမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံကိစ္စကို နယူးယော့ခ်တွင်ပြုလုပ်သည့် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ကြီးချုပ် စူရာယွတ်က ပြောသည်။
၎င်းက “ဒီကိစ္စကို ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။
ပြီးတော့ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို စေလွှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်” ဟုပြောသည်။
သို့သော် ၀န်ကြီးချုပ် စူရာယွတ်က မြန်မာ့အရေးပြဿနာအဆုံးသတ်စေရန် ကုလသမဂ္ဂ
ဦးစီးပြီး တရုတ်၊ အိန္ဒိယနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံတို့ ပါဝင်သော ဒေသတွင်းဆွေးနွေးပွဲတခု
ကျင်းပရန် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဂမ်ဘာရီနှင့် ယခင်လတွေ့ဆုံစဉ်က အဆိုပြုခဲ့သည်။
ယင်းသို့ အဆိုပြုခြင်းသည် သက်ဆိုင်သူအားလုံးအား ဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းသို့ ရောက်ရှိ
လာစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာ စူရာယွတ်က ပြောသည်။
မစ္စတာဘန်ကီမွန်းသည် ယခုနှစ်ဇန်န၀ါရီတွင် ကိုဖီအာနန်ထံမှ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် တာဝန်ကို လွှဲပြောင်းယူပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံသို့လာရောက်သည့် ပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။
Posted by Andaman Hero at 7:41 PM0comments
ဟီ .. ဟိ .. သတိထားကြပါတဲ့
Posted by Andaman Hero at 7:28 PM0comments
Labels: ဖြန့် ဝေခြင်း
ဘာတဲ့ …တနေ့က ရန်ကုန်မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး မြန်မာအမျိုးသမီး ၂၇ ယောက် ရန်ကုန်မြို့တော် အလယ်တဝိုက် ဆူးလေဘုရားမှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာ စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းပြီး နောက်ပိုင်းမှာ နအဖ တွေကို ပြန်လည် ခြိမ်းခြောက်လိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဆူးလေကနေပြီးတော့ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားကို ချီတက်ပြီး ဆုတောင်း မေတ္တာပို့ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အော်…ကျမတို့ မိန်းမတွေ တယ်လဲ သတ္တိရှိကြပါလားလို့ တွေးမိတာနဲ့ အမျှ၊ အဲဒီသတ္တိမျိုး ယောက်ျား တော်တော်များများမှာ ရှိရင်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိပြန်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းတပါး အဝေးရောက်နေတဲ့ ယောက်ျား အများစုကို ပြောချင်တာပါ။
မမီးမီး၊ မစုစုနွေးတို့ အဖမ်းခံ နေရပြီ။ မနီလာသိန်း၊ မဖြူဖြူသင်းတို့ထွက်ပြေးနေရပြီ။ တခြား နံမည်မသိသော မိန်းမပေါင်းများစွာ ထောင်ထဲမှာ၊ တောထဲမှာ တန်းစီနေလို့ပါလား။ အခုနောက်ဆုံး ချီတက်ဆန္ဒပြတာ ယောင်္ကျားတွေ မပါဘဲ မိန်းမတွေချည်းပဲ ဘာလို့ဖြစ်နေရတာလဲ။ ယောက်ျားတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ကြလဲ။
မသိလို့ပါ။ ယောင်္ကျားပီပီ ကြောက်များ ကြောက်နေကြသလားလို့။ တွေးလို့ရ၊ သိလို့ရသမျှတော့ နအဖ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ကိုယ်တိုင်က ယောင်္ကျားကြီးတွေလုံးလုံး ဖြစ်ရက်နဲ့ မိန်းမတယောက်ဖြစ်တဲ့ 
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တယောက်ကိုတောင် ခုထိလက်ခံ မတွေ့ဆုံရဲတာဟာ ကြောက်လို့ မဟုတ်ရင်၊ ရင်မဆိုင်ရဲတာပေါ့။ ကြောက်တာထက် ဆိုးတယ်၊ သိမ်ငယ်တာ ပါသွားပြီ။ မဟုတ်တာတွေ လုပ်ထားတာ သိပ်များနေပြီဆိုတော့၊ အင်း…တွေ့ရဲမယ် မထင်။ ဒါကို … အကောင်းဖက် လှည့်တွေးပေးဖို့ မကြံကြနဲ့။
အချိန်ဆွဲနေတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ တွေ့ဖို့ ကို ကြောက်နေကြတာ၊ အဟား…ရီစရာပဲ။
ကျန်တဲ့ နအဖ မဟုတ်တဲ့ လူတွေ(ယောင်္ကျားတွေ)ကရော ဘာထူးလဲ။ အဝေးရောက်နေတဲ့ ယောင်္ကျားတွေလေ၊ ပိုတောင် ဆိုးသေးတယ်။ လေပဲ ပစ်နေကြတယ်။ ဆင်ပဲဖမ်းတော့ မလို၊ ကျားပဲ ဖမ်းတော့ မလို၊ တကတည်း … ခုထိ သေနတ်က ပြောင်းတိုက်တုန်း။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ပြည်သူတွေ ငတ်ကုန်ကြပြီ။ ရဟန်းသံဃာ၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ သေသူသေ၊ အဖမ်းခံရသူ ခံရ၊ ပျောက်သူတွေ ပျောက်၊ ကျန်တဲ့သူတွေလည်း နိူင်ငံရေး ဆက်လုပ်ဖို့ထက်၊ ထမင်းတနေ့ နပ်မှန်အောင် စားဖို့ ပြန်ရုန်းနေကြရပြီ။
ကျမတို့ ပြည်တွင်းက ရှိစုမဲ့စု အင်အားလေးနဲ့ လုပ်ဆောင်နေကြရရှာတဲ့ ရဟန်းရှင်လူ၊ ကျောင်းသား၊ မိန်းမ ပြည်သူတွေအတွက် ဒီက လူတွေ မရှက်ကြဘူးလား။ ပြည်တွင်းမှာက ငါတို့ ပြည်သူတွေခမျာ သေနတ်ပြောင်းတွေနဲ့ ချိန်ထားခံရတာနော်။ မဟုတ်လည်း မိသားစုလိုက် ဖမ်းပြီး ခြိမ်းခြောက်ခံရလိုခံရနဲ့ ဘယ်လိုမှ မလှုပ်သာဘူး။ ရှင်တို့ကို ဒီမှာ ဘာသေနတ်ပြောင်းက ထိုးချိန်ထားလို့လဲ။ တိုင်းပြည် တကယ်ချစ်စိတ်ရှိရင် အငြင်းမပွားကြပါနဲ့၊ အချင်းမများကြပါနဲ့၊ စဉ်းစားမနေကြပါနဲ့၊ တကယ်လုပ်ရမှာ ကျတော့ ကြောက်ပြီး အရူးချီးပန်း သွေးရူးသွေးတန်းနဲ့ တယောက်အပေါ် တယောက် အပြစ်တွေ တင်မနေကြပါနဲ့။ ကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ် ကိုယ်ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသိဆုံး၊ ပြည်ပမှာ ရောက်နေတာ အခွင့်အရေးတွေ ငါတို့ ပြည်တွင်းကလူတွေထက် အများကြီး ရှိနေတာပါ။ (ရသင့်ရထိုက်တာတွေလည်းရပြီး ကြပါပြီ၊ တော်လည်း တော်လောက်ပါပြီ)
တကယ်လုပ်ရတော့မယ့် အချိန်ကျမှ ထမင်းရေပူလာ လျှာလွှဲ အကြောက်တရားတွေ ကြီးစိုးပြီး ကြောက်ကန် ကန်နေသလို ဖြစ်နေတဲ့ အပြုအမူတွေ ရပ်တန်းက ရပ်ကြပါ။ မဟုတ်ရင် ….ကျမတို့ မမီးမီးတို့၊ မနီလာသိန်းတို့၊ မဖြူဖြူသင်းတို့၊ မစုစုနွေးတို့ အန္တရာယ်ကြားက ချီတက်ဆန္ဒပြကြတဲ့ မိန်းမတွေနဲ့ ရှင်တို့ အဝေးရောက် ယောင်္ကျားတွေနဲ့ ဘဝပြောင်းကြမလား။ နေရာလဲ ကြမလား။ ကြောက်နေကြရင် ပြောကြစမ်းပါ ...။ ။
Posted by Andaman Hero at 11:35 AM0comments
Posted by Andaman Hero at 12:42 PM0comments
နေ၀င်လိုက် ၊ လထွက်လိုက်နဲ့ 
နှစ်တွေသာ ၊ အလီလီပြောင်းခဲ့တယ်။
မင်းတို့ အဖိုး ၊ မင်းတို့ အဖေတွေ
ကယ်တင်ရှင်ကိုစောင့်ရင်း ၊ အိပ်မက်ထဲအချိန်ကုန်ခဲ့တယ်။
မင်းတို့ ခေတ် ၊ ဂလိုဘယ်လိုက်မှာ
တို့ တိုင်းပြည်အနာဂါတ် ၊ အာရှမှာရင်ဘောင်တန်းနိုင်မယ်။
မင်းတို့ လည်း ၊ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး
ပိုက်တရာ ၊ ဘောဒ်ဂါနဲ့ အချိန်ဖြုန်းနေရင်
စစ်ကျွန်ဘ၀ဆိုးမွေကိုသာ ၊ မင်းတို့ သား ၊ မြေးတွေကို
အိုက်စံ မွန်းလွဲ ၃း၁၅ ( ၂၃ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၀၇ )
Posted by Andaman Hero at 3:14 PM0comments
မွန်းလွဲ ၂း၀၀ ( ၂၃ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၀ရ )
Posted by Andaman Hero at 2:24 PM0comments
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးပုံတွင် အတွင်းခံဘောင်းဘီစွပ်ကာ ရန်ကုန်တွင် ဆန္ဒပြ
သတင်း - ဧရာဝတီ (၈-၁၁-၂၀၀၇)
ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်အောင်ကျော် လမ်းထိပ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ ဦးခေါင်း၌ အမျိုးသမီး အတွင်းခံ ဘောင်းဘီများ စွပ်ထားသည့် ပိုစတာများ ကိုင်ဆောင်ကာ “သံဃာသတ်အစိုးရ ကျဆုံးပါစေ” ဟုကြွေးကြော်၍ ဆန္ဒပြကြသည်ဟု ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားအဖွဲ့က အတည်ပြု ပြောဆိုသည်။
ဆန္ဒပြပွဲ၌ ဆန္ဒပြသမား ၄၀ ခန့် ပါဝင်ပြီး လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရောက်လာသောကြောင့် ဆန္ဒပြချိန် အနည်းငယ်သာရပြီး လူစုခွဲလိုက်သည်ဟုလည်း သိရသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သည့် ကိုစိုးထွန်းက “လူထုရဲ့ လွတ်လပ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ တရားမျှတမှုတွေကို လိုလားတဲ့ စိတ်ဓာတ်က ဘယ်လိုပဲ အကြမ်းဖက်မှုတွေ လုပ်လုပ် တားဆီးလို့ မရပါဘူး။ အခြေအနေ အချိန်အခါ အရသာ ခေတ္တခဏ ငြိမ်သွားပေမယ့် အခွင့်အရေးရရင် ရသလို သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကို ထုတ်ဖော် ပြသကြမှာ ဖြစ်တယ်” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် အခြေစိုက်သည့် Lanna Action for Burma အဖွဲ့က အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသမီး အတွင်းခံ ဘောင်းဘီများကို မြန်မာသံရုံးသို့ ပို့သည့် လှုပ်ရှားမှုအား စတင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး စင်ကာပူ၊ သြစတေးလျနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူ အမျိုးသမီးများလည်း လိုက်ပါလှုပ်ရှားကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေအား အမျိုးသမီး အတွင်းခံ ဘောင်းဘီဖြင့် ပစ်ကစားသည့် အင်တာနက်ဂိမ်းကိုလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ အခြေစိုက် Mochi Media ကုမ္ပဏီက နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က စတင် ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီး အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ကစားနိုင်သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် ပြည်တွင်းရှိ လူထုလှုပ်ရှားမှု ကော်မတီက စစ်အစိုးရ ထုတ်ဝေသည့် သတင်းစာများအား စုတ်ဖြဲလွှင့်ပစ်ကာ မီးရှို့ဖျက်ဆီးသည့် နိုင်ငံရေး အံတုလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်ကြရန် ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လူထုလှုပ်ရှားမှု ကော်မတီကို စက်တင်ဘာလ သပိတ်မှောက် ကာလအတွင်း လှုပ်ရှားမှုများအား ကြီးကြပ်ရန်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး သံဃာတော်များနှင့် ကျောင်းသားများ ပါဝင်သည်။
“တနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၆) ကတော့ ကြည့်မြင်တိုင် ဗားကရာမှာ သတင်းစာတွေ အစောင် ၄၊ ၅ ရာလောက်ရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို သူတို့ မဖတ်တော့ဘူး၊ ဖတ်လောက်စရာ မရှိဘူးလို့ ပြောပြီး မီးပုံရှို့ကြတယ်။ ရှို့တဲ့လူကတော့ မများဘူး” ဟု ရန်ကုန်ရှိ အမျိုးသမီးတဦးက ပြောသည်။
ယမန်နေ့ကလည်း ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ နံရံအချို့တွင် “သံဃာသတ်တဲ့ မိစ္ဆာတွေ မြန်မြန်သေပါစေ” ဟူသည့် စာသားများကို မှုတ်ဆေးအနီများနှင့် ရေးသွားသောကြောင့် ရန်ကုန်တွင် လုံခြုံရေးများ တင်းကျပ်စွာ ချထားသည်ကို တွေ့ရသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက ဧရာဝတီကို ပြောဆိုသည်။
Posted by Andaman Hero at 6:24 PM0comments
မေဃ၀တီ၊ ကြခတ်ဝိုင်းနှင့် မင်းခရဟန်း၊ ကမ်းနားသစ်ပင်
မြန်မာစာပေတွင် မင်းခယောက်ျား ဟူသော စကားသာ ရှိခဲ့ပေသည်။ ယခုမှ မင်းခရဟန်း ဟူသော စကားကို တီထွင်ရမည့် အခြေအနေမျိုး ဆိုက်နေပေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော် ကဲ့သို့သော နအဖ မင်းတရားကြီး အကျိုးအတွက်ဆိုလျှင် ရွပရရွပ်ချွံချွံ နာမည်ပင် သေသေ အမှုတော် ထမ်းရွက်မည့် ဆရာတော်ကြီးများ အကြောင်းကို ကြားနေ ဖတ်နေရသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ခေတ်အဆက်ဆက် ရာဇ၀င်တွင် အုပ်စိုးသူ မင်းအပေါ် သြဇာညောင်းသော သာသနာပိုင်များ၊ မင်းဆရာများ အကြောင်းသာ ဖတ်ဖူးခဲ့ပါသည်။ ဘုရင်၏ အမိန့်ကို နာခံခဲ့ ၊ ခိုင်းဖတ်ဖြစ်ခဲ့ရသော ဆရာတော်ကြီးများ အကြောင်း ကိုမူ မမှတ်သားမိခဲ့ဖူးပါ။ ယခုမူ ရာဇ၀င်တွင် စာတင်လောက်စရာ အာဏာရှင်များ၏ လက်ညှိုးထောင် ခေါင်းညိတ် ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော်ကြီးဆိုတာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။
အကြင်မင်းမှုထမ်း တဦးသည် အမှုတော်ကို ဦးဆွေးဆံမြည့် သက်စွန့်ကြိုးပမ်း ထမ်းရွက်ခဲ့လျှင် မင်းဖြစ်သူက မြှောက်စား၍ မင်းစိုးရာဇာအပါး အနီးကပ် ခစားခွင့် ရတော့သည်။ ထိုသူအား မင်းခယောင်္ကျားဟု ခေါ်ကြလေသည်။ အနှီကဲ့သို့ မင်းအပါး ခစားနေသည်မှာ ရဟန်းတော်များ ဖြစ်သည်ကို ယခုလို တွေ့မြင်ကြရသောအခါ မင်းခရဟန်း ဟုသာ ဆိုထိုက်လှပေစွ။
စက်တင်ဘာ သပိတ်မှောက် ကံဆောင်ပွဲကြီးတွင် အနှီရဟန်းတို့သည် ရဟန်းဘ၀ တလျှောက်လုံး မိမိတို့ကို ဆွမ်းကပ်ခဲ့သော ဒကာပြည်သူတို့၏ ဆန္ဒကို လျစ်လျူရှု၍ အာဏာရှင်များ ဘက်သို့လိုက်ကာ ရုပ်သေးရုပ်ပမာ အသုံးတော်ခံ ပါလေသည်။ ဘ၀တူ ဘုရားသားတော် ရဟန်းများ သွေးမြေကျရသည်ကိုပင် ကန့်ကွက် ဖြောင်းဖျရမှန်း သတိမရဘဲ မျက်စိမှိတ်၊ ပါးစပ်ပိတ် နေနိုင်ရက်ပါပေသည်။
နီးရာဓားကို ကြောက်ရသောကြောင့် အာဏာရှင်များ အငြိုအငြင်ကို မခံရဲခြင်းပေလောဟု ဖေးဖေးမမ တွေးဆ ကြည့်မိသော်လည်း ထိုအချက် တခုတည်းကြောင့်ဟု ဆို၍ မရစကောင်းချေ။ ကြခတ်ဝိုင်း အပါအ၀င် အလိုတော်ရိ ဆရာတော်ကြီးများတွင် ထောက်ထားစရာ အခြားကိစ္စများလည်း ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော်ကြီးဆိုလျှင် ဘဏ်တွင် အပ်နှံထားမိသော ငွေသိန်းပေါင်း ၃၇၀၀၀ကျော် (နအဖ ငြိုငြင်လျှင်) ဆုံးရှုံးမည့် ကိစ္စမျိုး ပူပင်ကောင်း ပူပင်ပါလိမ့်မည်။
အခြား ဆရာတော်ကြီးများ ဆိုလျှင်လည်း နာယက ရာထူးများမှ လျောကျမည့်အရေး
တွေးပူကောင်း ပူပေလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ် နအဖတွင် ဆရာတော်ကြီးများကို အိတ်ထဲ အပိုင်ထည့်ထား နိုင်လောက်အောင် အကျပ်ကိုင် ထားနိုင်သည့် ကျွန်တော်တို့ မသိသော အောက်လမ်းနည်းများလည်း ရှိနေနိုင်ပါသည်။
မည်သို့သော အကြောင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်စေ ထိုဆရာတော်ကြီးများ ကလည်း ကိုယ့်လမ်းကို ကိုယ်ရွေးသွားကြပါသည်။ နောင်တွင်သာ မိမိတို့ တာဝန်မကျေခဲ့မှုကြောင့် မိမိတို့၏ ရဟန်းငယ်သားများ ခိုမှီရာမဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရခြင်း၊ ကျောင်းများ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရခြင်း၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အစော်ကား ခံခဲ့ရခြင်းတွေ အားလုံးအတွက် နောင်တမရကြပါစေနဲ့ ဟုသာ ကျနော်တို့ ဆုတောင်းကြရန် ရှိပါသည်။
ထိုသို့သော မင်းဆရာများ၏ ကံကြမ္မာအကြောင်း ဆက်ပြီး တင်ပြ လိုပါသေးသည်။
တခါက ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ကိုးကွယ်ခဲ့သော မေဃ၀တီ အမည်ရှိ ဆရာတော်ကြီး တပါး ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုဆရာတော်ကြီးသည် အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့ အစီအရင် အင်မတန် တော်သည်ဟု နာမည်ကြီးပါသည်။ ယခင်က သင်္ကန်းကျွန်းတွင် မထင်မရှား သီတင်းသုံးခဲ့ရသော ထိုဘုန်းကြီးမှာ သူပေးခဲ့သော အစီအရင်တခု အပေါက်အလမ်း တည့်သွားသောကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်က မြှောက်စားသည်တွင် ဗွီအိုင်ပီဘုန်းကြီး နေ့ချင်းညချင်း ဖြစ်သွားပါတော့သည်။
ထို့နောက် မေဃ၀တီ ကျောင်းလည်း ခမ်းနားခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်နှင့် ပတ်သက်လိုသူများကလည်း အခွင့်အရေး ရလိုရငြား ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ၀င်ထွက်ကြသည်။ ထိုကျောင်းဝင်း အတွင်းတွင် လာသမျှ ဧည့်သည်မပြောနှင့် ကပ္ပိယ လက်ထဲတွင်ကအစ လက်ကိုင်ဖုန်း ရှိသည်။ လာသမျှ ဧည့်သည်အားလုံးကို နေ့တိုင်း သတ်သတ်လွတ်ထမင်း ကျွေးနိုင်သည်။ ဆရာတော်ကြီးကလည်း သူဘုန်းတန်ခိုး ကြီးလာသလို သူ့တပည့် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် တန်ခိုးထွားနေဖို့ သူစွမ်းသလောက် အစီအရင်တွေ ဆက်လုပ်ပေးနေခဲ့တာပါပဲ။
သူတို့ တန်ခိုးမှိန်ချိန် ရောက်လာတော့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် မပြုတ်ခင် သုံး၊ လေး ရက် အလိုမှာ ဆရာတော်ကြီး နှလုံးသွေးကြော ပိတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အိပ်ရာထဲ ဘုံးဘုံးလဲပါတယ်။ သတင်းမေး လာကြသူတွေ ဆိုတာ ကျောင်းနဲ့ အပြည့်ပါပဲ။ ဆရာတော်ကြီး မီးစာကုန်လို့ပဲ ခင်ညွန့်ရဲ့ ဘုန်းကံပျောက်သလား မဆိုနိုင်ဘူး။ နောက်သုံးလေးရက် အကြာမှာ ခင်ညွန့် ပြုတ်ပါတယ်။ ခင်ညွန့်လည်း ပြုတ်ရော ဆရာတော်ကြီး အနားမှာ ၀ိုင်းနေခဲ့တဲ့ ဒကာတွေလည်း ချက်ချင်း ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်တော့တာပါပဲ။ ခြွေရံသင်းပင်းနဲ့ နေ ရတာ သာယာနေတတ်တဲ့ ဆရာတော်တွေအတွက် ဆိုရင်တော့ အကြီးအကျယ် သံဝေဂစရာပါ။
ဆရာတော်ကြီးကတော့ ခဏတဖြုတ်တော့ ထူထောင် လာပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တပည့်အတွက် စိတ်ထိခိုက်လို့ပဲ ရောဂါထပ်ဖောက် သွားသလား၊ တပည့်နဲ့ ကံကြမ္မာတူပဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန် နှိပ်ကွပ်ခြင်း ခံရမှာကိုပဲ လန့်သွားလို့လား မဆိုနိုင်ဘူး။ နောက်လေးငါးရက် အကြာမှာ ပျံလွန် တော်မူသွားပါတယ်။ ဘုန်းကြီးပျံပွဲကိုတောင် နအဖက အကြီးအကျယ် လုပ်ခွင့်မပေးလို့ အကျဉ်းရုံး လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
မင်းခယောင်္ကျား၊ ကမ်းနားသစ်ပင် … တဲ့။
မင်းဧကရာဇ်အပါး ခစားတဲ့ အစေအပါး ကျွန်ယုံတွေရဲ့ ဘ၀ဟာ ခိုင်မြဲလေ့ မရှိပါဘူး။
အဲဒီလိုပဲ မင်းခရဟန်း … တဲ့
ကျနော်တို့ ဆက်ပြီး စောင့်ကြည့်ကြပါစို့လား ခင်ဗျာ …။
Posted by Andaman Hero at 6:19 PM0comments
ဂမ်ဘာရီက ပထမအခေါက် မြန်မာပြည်က အပြန်မှာ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သံဃာ လူထု ဆန္ဒပြမှု၊ အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်းမှု၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ သူကြားသိ တွေ့ကြုံရသမျှကို အားလုံးရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ
အရှိအတိုင်း အစီရင်ခံတယ်။ အဖွဲ့ဝင် ၁၅နိုင်ငံ စလုံးက ဂမ်ဘာရီရဲ့  ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံတယ်။ တရုတ်၊ ကုလား၊ ရုရှားလည်း ပါတယ်လေ။ အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်၊ သြစတြေးလျတို့က သူတို့ တနိုင်ငံချင်းစီ စီးပွားရေး ထပ်မံ ပိတ်ဆို့တယ်။ (ဆိုကြပါစို့ ဥပမာ ဈေးထဲမှာ အပေါက်ဆိုးတဲ့ ဈေးသည်ကို ကျမ မ၀ယ်ဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲက လူမိုက်ကို ကျမ မပေါင်းဘူး)။သူ့ကိုယ်ပိုင် မူဝါဒနဲ့ သူဆောင်ရွက်တာပဲ။ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် တော်တယ် တတ်တယ် ထင်ရင်လည်း နအဖ စစ်အုပ်စုဝင်တွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဘယ်သူ့မှ မစောင့်ဘဲ စီးပွားရေး လုပ်ကြပါလား။ ခုတော့ နယ်န်ိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေတဲ့ ထိုင်းတို့ ရန်ကုန်တိုင်း လောက်တောင် မရှိတဲ့ စင်င်္ကာပူတို့လို နိုင်ငံတွေကို တနေ့တနေ့ ထွက်ပြေးလာနေတဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ပညာရေး ဒုက္ခသည်တွေ ဆိုတာ များမှများပါ။
ဒါကို ကျော်ဆန်းဆိုတဲ့ ဘာမှန်းညာမှန်း မသိတဲ့ကောင်က ဂမ်ဘာရီကို "ခင်ဗျား အစီရင်ခံ ပြီးကာမှ ပိုတောင် ဆိုးနေတာ ခင်ဗျား မဟုတ်တာလုပ်လို့ဘဲ" ဆိုပြီး ပြောနေပြန်သေး။ ဂမ်ဘာရီရဲ့ တာဝန်ကိုလည်း နားမလည်ဘူး ။ ဂမ်ဘာရီကို ဘာကိစ္စနဲ့ ဘယ်သူက လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကော နအဖ သိရဲ့ လား မသိ။ ဘာဆိုဘာမှ မသိတဲ့ သနားစရာ နွားသတ္တ၀ါ ပါလားလို့ပဲ တွေးမိတယ်။ ငါ့စကား နွားရ သူ့ရဲ့ တသက်လုံး ပြောနေကျ သူပိုင် မီဒီယာက ပြောသလို ပြောနေတယ်။ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အမေရိကန် ပြင်သစ် ရောချလိုက် စွပ်စွဲလိုက် ။ ဒီလောက် သတ္တိကောင်းနေမှတော့ အမေရိကန်လို့ ဗြောင်ပဲ ပြောလိုက်ပါတော့လား။ ဘင်လာဒင်တို့ အမာဒီနိဂျက်တို့လို …။
အင်း … နအဖ ကတော့ ခြေလှမ်းတွေ မှားပြီးရင်း မှားရင်းပေါ့.. ကောင်းပါတယ် .. များများ မှားလေ ဇာတ်သိမ်းကာနီးလေ ဖြစ်လာမှာ ဆိုတော့ …။
အဆင်းမှာ ဘီးတပ်ပေးကြပါစို့ …။
Posted by Andaman Hero at 1:27 PM0comments
ငါ … ဆွေးနေမိရဲ့ 
မျက်ရစ်မပါတဲ့ အချစ်နဲ့ 
သူတပါးတိုင်းပြည်ရဲ့  အသွေးအသား
တို့နိုင်ငံရဲ့  “ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး”
“ပုရွက်ဆိတ်တွေရဲ့  ဘုံဝါဒ
အဓွန့်ရှည်ပါစေ၊ ခွေးအတွေရဲ့ 
Posted by Andaman Hero at 9:53 AM0comments
Posted by Andaman Hero at 6:30 PM0comments
ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော်နဲ့ ကျောင်းတိုက်က သံဃာတွေကိုပဲခူးမြို့ခံတွေ သပိတ်မှောက်
ပဲခူးမြို့ပေါ်က ရပ်ကွက်တွေရဲ့ လမ်းတိုင်း လမ်းတိုင်းမှာ “သားသုံးသား”ကို အမြစ်ပြတ် သုတ်သင်ချေမှုန်းဖို့ နအဖစစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးတွေကို အခါတော်ပေးခဲ့တဲ့ သာသနာဖျက် ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော်နဲ့ ကျောင်းတိုက်က သံဃာတွေကို ပဲခူးမြို့ခံ ပြည်သူတွေက သပိတ်မှောက်တဲ့ အနေနဲ့ “ကြခတ်ဝိုင်း ကျောင်းတိုက်က သံဃာတော်တွေကို ဆွမ်းမလောင်းပါ” ဆိုတဲ့ စာတန်းတွေ နေရာအနှံ့ ကပ်ထားကြောင်း ပဲခူးမြို့ခံတွေရဲ့ ပြောပြချက်အရ သိရှိရပါတယ်၊၊
စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံပြီး ပတ္တနိက္ကုဇ္စုန ကံဆောင်ခြင်း မလုပ်တဲ့အတွက် ကြခတ်ဝိုင်း ကျောင်းတိုက် ဆရာတော်နဲ့ ကျောင်းတိုက်မှာ သီတင်းသုံးတဲ့ သံဃာတွေကို ပဲခူးမြို့ခံတွေက အခုလို ဆွမ်းကပ်လှူခြင်း မပြုတော့ကြောင်း ကြေငြာပြီး သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်၊၊
ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော်ကလည်း ပဲခူးမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ ဆွမ်းမကပ်လှူခြင်းအပေါ် တုန့်ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ သူပိုင် ငွေစာရင်း ရှင်းတမ်းတခု ထုတ်ပြန်ပြီး ပဲခူးမြို့ခံတွေရဲ့ သပိတ်မှောက်မှုကို ချက်ခြင်း တုန့်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်၊၊ ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော်ရဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာ ဒကာ၊ ဒကာမတွေ ဆွမ်းမကပ်လည်း ကျောင်းတိုက်မှာ ငွေသိန်းထောင်နဲ့ချီ ရှိတဲ့အတွက် ဆွမ်းမရှားကြောင်း တုန့်ပြန် ရေးသားတာကို တွေ့ရပါတယ်၊၊
ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော်ရဲ့ ဘွဲ အမည် အပြည့်အစုံကို ကြေညာချက် ရှေ့ပိုင်းမှာ ရေးသား ဖော်ပြထားပါတယ်၊၊ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းမှာ ငါလိမ္မာတာ ငါဖို့ ၊ ငါချွေတာ ငါဖို့၊ ငါကြိုးစားတာ ငါဖို့ ဆိုတဲ့ မူအတိုင်း သွားနေတဲ့ ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော်ဟာ ပျံလွန်ဖို့ (၁၄)လ လိုသေးတယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်၊၊
ကျောင်းထိုင်သက် ၅၉နှစ်ရှိတဲ့ ဆရာတော်ရဲ့ ငွေစုနှစ် အနှစ် ၃၀ ပြည့်ပြီဖြစ်ကြောင်း ငွေပင်ငွေရင်း စုငွေပေါင်း သိန်းပေါင်း သုံးသောင်းနဲ့ ခုနှစ်ထောင် ရှိနေတဲ့အတွက် ဆွမ်းကွမ်းကိစ္စ ပူစရာ မရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်၊၊
လက်ရှိ စာချသံဃာ အပါးတစ်ထောင်ကျော်ကို ကျွေးမွေးတဲ့ နေရာမှာ ၀အောင် ကျွေး၊ လှအောင် ပေး၊ တတ်အောင် သင်၏၊ ငြိမ်အောင် အုပ်တယ်လို့ ပါရှိပါတယ်၊၊
အခုလို တုန့်ပြန်ရေးသား ကြေညာထားတဲ့ ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော်ရဲ့ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း ကြေညာချက်ကို ဖတ်ရတဲ့ ပဲခူးမြို့ ခံတွေကလည်း ကြခတ်ဝိုင်း ကျောင်းတိုက် သံဃာတွေကို ဆွမ်းမလောင်းလှူရေး ဆန္ဒပြမှု ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်၊၊
ပဲခူးမြို့ ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော်ရဲ့ နှစ်စဉ် ပြုလုပ်နေကျ ပ၀ါရဏာပွဲအတွက် မြို့ခံပြည်သူတွေက လုံးဝ ၀င်မကူကြတဲ့အတွက် တပ်မ(၇၇)က စစ်သားတွေက ဦးဆောင်ပြုလုပ် ပေးခဲ့ရကြောင်းလည်း မြို့ခံတွေက ပြောကြပါတယ်၊၊
Posted by Andaman Hero at 6:18 PM0comments
ကြခတ်ဝိုင်းဆရာတော်ရဲ့ ကြေညာချက် အပြည့်အစုံ
Posted by Andaman Hero at 6:15 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 6:04 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 5:59 PM0comments
ဧရာဝတီ | နိုဝင်ဘာ ၆၊ ၂၀၀၇
စစ်အစိုးရ၏ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် အထိန်းသိမ်းခံထားရသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သည် ကျန်းမာရေးမကောင်းသောကြောင့် ဆေးကုသမှုခံယူနေရကြောင်း သိရှိရသည်။
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ သူ၏ မိသားစု ဆရာဝန်က ပုံမှန်သွားရောက်ချိန် မဟုတ်ဘဲ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဘယ်လောက်အထိ ဆိုးဝါး သလဲ မဆိုးဝါးဘူး ဆိုတာ ကိုတော့ ကျနော်တို့ အခုအချိန်အထိ မသိရသေး ပါဘူး”ဟု ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ ပြီးခဲ့သော မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းတွင် သူ၏ မိသားစုဆရာဝန်က ၂ ရက်ဆက်၍ သွားရောက်ခဲ့ရသည်ဟုလည်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အသက်အရွယ် ကြီးရင့် လာရုံမျှမက နိုင်ငံရေး အခြေအရ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးသူ တဦးဖြစ်သောကြောင့် သူ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အတွက် မိသားစု ဆရာဝန်နှင့် တပတ်တကြိမ် တွေ့ခွင့်ပေးရန်လည်း အာဏာပိုင်များကို တောင်းဆိုထားသည်ဟု အန်အယ်လ်ဒီ က ဆိုသည်။
အသက် ၆၂ နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇွန်လ အတွင်းက ၀မ်းပျက် ၀မ်းလျှောဝေဒနာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်ပွားသောကြောင့် ဆေးရုံသို့တက်ရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူ ခဲ့ရဖူးသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ အာရှတော်ဝင် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ၌ အမျိုးသမီး မီးယပ်သားဖွားရောဂါဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ကုသမှုကို ခံယူခဲ့ရသေးသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒီပဲယင်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှစ၍ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းခံနေရသည်မှာ ၄ နှစ် ပြည့်ပြီးဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှစ၍ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဘ၀ဖြင့် နေရချိန် စုစုပေါင်းမှာ ၁၂ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော သံဃာတော်များဦးဆောင်သည့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြပွဲများအား စစ်အစိုးရက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုများ အပြီး အောက်တိုဘာလဆန်းက မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲအတွက် ရောက်ရှိလာသော ကုလမဂ္ဂ အထွေ ထွေအတွင်းရေးမှူး ချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ အီဗရာဟင် ဂန်ဘာရီသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထံသို့ ၂ ကြိမ် သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
မစ္စတာ ဂန်ဘာရီသည် လတ်တလော မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ထပ်မံတွေ့ဆုံနိုင်မည့် အလားအလာ နည်းပါးကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းများက ဆိုသည်။
Posted by Andaman Hero at 11:06 AM0comments
Posted by Andaman Hero at 10:55 AM0comments
Posted by Andaman Hero at 10:50 AM0comments
နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊၂၀၀၇၊
Posted by Andaman Hero at 4:41 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 4:28 PM0comments
“အယူတော်မင်္ဂလာဦးနိုး . တဘောင် “
‘ယော အတွင်းဝန် ဦးဖိုးလှိ်ုင် . တဘောင် “
Posted by Andaman Hero at 12:55 PM0comments
Labels: ဖြန့် စေခြင်း
Posted by Andaman Hero at 12:36 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 12:20 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 11:55 AM0comments
မဲဆောက် ကွန်မြွန်း အောင်ဝေး ကြောက်တတ်ရင် မဲဆောက်ဟ...
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့လေးစား .. ဂုဏ်ယူရတဲ့ .....
နအဖ .. ရေ .. ဒီလူတွေရေးတဲ့အခြေခံရမယ့်မူတွေ .. တိုင...
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးပုံတွင် အတွင်းခံဘောင်းဘီစွပ်ကာ ရန...
မေဃ၀တီ၊ ကြခတ်ဝိုင်းနှင့် မင်းခရဟန်း၊ ကမ်းနားသစ်ပင်...
ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော်နဲ့ ကျောင်းတိုက်က သံဃာတွေကိုပဲခ...
တောင်ဥက္ကလာပတွင် ဒီကနေ့မနက် (၆)နာရီ၌ Spray Campaign...